Aza mandany be amin'ny famolavolana tranonkala | Martech Zone
Asabotsy Jolay 4, 2009 Alakamisy, Jona 29, 2017 Douglas Karr
Maro amin'ireo namako no mpamorona tranonkala - ary manantena aho fa tsy ho sosotra amin'ity lahatsoratra ity izy ireo. Voalohany, avelao aho hanomboka amin'ny filazako fa ny famolavolana tranonkala lehibe dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny karazana mpanjifa mahasarika anao, ny tahan'ny valim-panontaniana manindry, ary koa ny vola miditra amin'ny orinasanao.
Raha mino ianao fa ny vokatra tsara na ny atiny lehibe dia maharesy ny famolavolana ratsy dia diso ianao. The miverina amin'ny fampiasam-bola amin'ny volavola lehibe efa voaporofo hatrany hatrany. Tena mendrika ny fotoana sy ny fandaniana.
Izany dia nilaza… ny famolavolana tsara dia tsy voatery handoa izany aminao. Rafitra fitantanana votoaty maoderina toy ny WordPress, Drupal, Django, Joomla, Magento (ho an'ny varotra), Engine Expression, sns dia samy manana motera misy lohahevitra maro karazana. Betsaka koa ireo rafitra famolavolana tranonkala, toa YUI Grids CSS, ho an'ireo tranonkala vita amin'ny rangotra.
Ny tombony amin'ny fampiasana ireo rafitra ireo dia azonao atao mitahiry be amin'ny fotoanan'ny mpamolavola sary sy tranonkala anao. Ny famolavolana tranonkala matihanina dia mety mitentina $ 2,500 ka hatramin'ny $ 10,000 (na mihoatra miankina amin'ny portfolio sy ny firesahana amin'ny masoivoho). Betsaka amin'io fotoana io no mety lany amin'ny famolavolana ny firafitry ny pejy sy ny CSS.
Raha tokony handoa layout sy CSS ianao, maninona raha misafidy lohahevitra an'arivony efa voaorina ary asaivo miasa fotsiny ny mpanakanto sary anao famolavolana sary? Ny famakiana ny endrika lehibe namboarina tao amin'ny Photoshop na Illustrator ary mampihatra izany amin'ny lohahevitra efa misy dia mitaky ampaham-potoana kely kokoa noho ny famolavolana azy rehetra hatrany am-boalohany.
Tombony fanampiny amin'ny fampiasana an'io fomba io ny fananganana mety hisy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana ary koa ny fampiasana - zavatra izay mailo hatrany ireo mpamorona lohahevitra alohan'ny hamoahana sy fivarotana lohahevitra an-tserasera. Satria maro amin'ireo mpamaky ahy no mpampiasa WordPress, iray amin'ireo tranokala tiako amin'izany ny WooThemes. Ho an'i Joomla, ny RocketThemes manana safidy mahafinaritra.
Torohevitra iray fanampiny, rehefa ianao misoratra anarana na mividy ireo lohahevitra ireo - aza hadino ny mahazo ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamorona. Ny fahazoan-dàlana ho an'ny developer ao amin'ny WooThemes dia manodidina ny avo roa heny ny vidiny (mbola manomboka amin'ny $ 150 ihany!). Ity dia manome anao ny fisie Photoshop tena izy hanomezana ny mpanakanto sary anao hamolavola azy!
Tags: DjangodrupalEngine ExpressionJoomlamagentorocketthemesWordPressYahoo UIyui grid css
Ny orinasanao sy ny varotrao dia toy ny ony
Jolay 4, 2009 amin'ny 7:33 PM
Jul 7, 2009 amin'ny 1: 12 AM
Jul 8, 2009 amin'ny 12: 47 AM
Jul 10, 2009 amin'ny 4: 13 AM